Ural ugwu. Njirimara, nhazi, mkpa, flora na fauna | Network Meteorology
Ugwu ndị anyị ga-akọwa taa ka a na-ahụta dịka oke ala etiti kọntinenti nke Europe na Eshia. Ọ bụ ihe gbasara Ural ugwu. Ha dị oke mkpa na akụkọ akụ na ụba ma dịrị na mpaghara ọdịda anyanwụ-Russia. Anyị na-ekwu na ọ nwere nnukwu mkpa akụ na ụba ebe ọ bụ na ọ bụ isi iyi nke ihe ịnweta yana ọ bụ otu n'ime usoro ugwu ochie kachasị ochie. Anyị na-echeta na afọ a na-eji usoro ugwu mee ihe na geological oge nke ahụ na-ekpebikwa ihe dị ukwuu afọ ole maka mmadụ.
N’isiokwu a anyị ga-egosi gị njirimara nke Ural Ural, flora na fauna yana mkpa akụ na ụba na akụkọ ihe mere eme ha.
2 Nkọwa nke akụkụ ya
3 Mbido Ural Ural
Dị ugwu a abụghị ihe a na-ahụkarị n'etiti ụdị ugwu ndị ọzọ. Oburu na ayi tulee ya na usoro ugwu ndi ozo dika iche himalayan, nwere ọdịdị fọrọ nke nta ka ọ kwụ ọtọ. Nke a adighi adi na ugwu. Mpaghara Ural Enwere ya iji nweta mineral, mmanu na okwute di oke onu ahia. N'ihi ya, ọ dị mkpa nnukwu akụ na ụba.
Ebe ọ bụ na ọ bụ ugwu ugwu nwere ezi ochie, mmanụ mmanụ nọgidere na-adịgide adịgide ma zuru oke maka nwupụta ya na nrigbu ya. Na mgbakwunye, mmịpụta nke mineral ndị ọzọ enyewokwa aka ịkwalite akụ na ụba nke mpaghara ndị gbara ugwu ndị a gburugburu.
Ọ bụ ezie na aha ugwu ahụ n'onwe ya amaghị, ụfọdụ ndekọ sitere na narị afọ nke XNUMX na XNUMX sitere na asụsụ Turkish. A maghị ugwu ndị a nke ọma na akụkọ ihe mere eme nke Europe n'oge a. Ndị ọkà mmụta mbara ala nke etiti Eshia enweworị ihe ọmụma dị omimi banyere ihe niile gbasara Ural Ural kemgbe narị afọ nke iri.
A na-eme atụmatụ afọ ole ugwu ugwu dị n’agbata afọ 250 na 300 nde, nke a na-ewere dịka otu n’ime ugwu ochie ndị dị n’elu ụwa anyị. O nwere ogologo nke ihe dịka kilomita 2500 na obosara nke kilomita 150 na ụfọdụ akụkụ kachasị. Mgbatị ya sitere na Arctic nke dị n'ụsọ oké osimiri tundra ruo Osimiri Ural na ebe ugwu ọdịda anyanwụ Kazakhstan.
Ebe ọ bụ na o buru ibu, ọ na-ekewapụ ala dị iche iche site na mpaghara dịka Polar Urals, Subpolar Urals, Northern Urals, Central Ural, na Southern Urals. Nke a bụ otu nhọta si ahọpụta ugwu niile ka ọ dị mfe ịhọrọ ọnọdụ nke ihe ụfọdụ.
Nkọwa nke akụkụ ya
Na subpolar akụkụ bụ ebe anyị nwere ike ịhụ ugwu ugwu ndị kasị elu elu na ọnụ ọgụgụ nke glasia. Dabere na ebe ịdị elu ya dịgasị, mana ọ na-adịkarị n’agbata mita 1000 na 1500. N'ebe ndị ọzọ, ugwu abụghị obere ugwu.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke o nwere bụ Narodnaya, nke dị ihe dị ka 1895 mita elu. Otu ugwu kachasị ama bụ Telposiz nke nwere mita 1617. N'ihi ihu igwe na ihe ndị e ji mara ya, akụkụ ebe ugwu nke Ural Uropụ bụ ndị na-adịghị arụ ọrụ, a pụghị ịzụlite ha. Na-enweghị ala nke nwere ike ịkwado osisi na ahịhịa nyere ọnọdụ snow na akpụrụ mmiri dị egwu, o nwere mpaghara ole na ole kpamkpam. Na mpaghara Polar Urals, oyi na-adịkarị ihe dị ka ọnwa 7. Nke a bụ ihe na-adịkarịghị, mana enyere ihu igwe na ọnọdụ ya, oge a na-agbatịkarị.
Akụkụ subpolar nwere oke ala mebiri emebi na oke ụba nke metamorphic na sedimentary nkume. Ndị a ụdị nkume A na-eme ha site na iweghachi nke ice ice na kwa afọ nke ice ọhụrụ na-eme kwa afọ na afọ.
O nwekwara ọtụtụ osimiri gafere ugwu niile. N'ebe ọdịda anyanwụ nke ugwu ugwu nwere osimiri Kama na Bélaya. N’ebe ndịda bụ Osimiri Ural, nke ahụ bụ nke na-asọba n’Oké Osimiri Caspian.
Mbido Ural Ural
A na-ahụta ya ka ọ bụrụ ugwu ugwu kachasị ochie n’ụwa. Afọ ya na-eme atụmatụ n’agbata afọ 250 na 300 nde. E jiri ya tụnyere ugwu ndị ọzọ a ma ama dị ka Himalayas, nke a akarịbeghị afọ 60. Ya mere, Na Ural, a na-ahụkarị oke mbuze ọtụtụ afọ, na-emetụta ọnọdụ ihu igwe nke ice, gbazee, ikuku, mmiri ozuzo, wdg.
Ugwu malitere ịdị mgbe usoro ikpeazụ nke oke osimiri ahụ mechiri malitere. Nke a bụ n'ihi nkewa nke Pangea. Na tectonic efere anyị mere ụfọdụ mmegharị nkwekọrịta nke mere ka eriri jikọrọ ibe ha iji mepụta Ural Ural.
Ndị ọkà mmụta banyere ala na-eche na ọ malitere ịmalite n'oge Ọgwụ Carboniferous na Permian. Ọ bụ, n'oge ahụ, nke a maara dị ka nsọtụ nke nnukwu ala a maara dị ka Laurasia. Nkọkọta nke ụwa jikọrọ ọnụ ruo ọtụtụ nde afọ nke e buliri eriri ahụ kpamkpam wee kpụọ ugwu. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ na-akụda mmụọ na ụbọchị e guzobere ya nwere ike ịbụ ụbọchị. N’aka ozo, ndi ugwu ahu nwere ugwu ohuru “ohuru” n’ejighi uwe, nke n’egosi ndi ntorobia nke elu ha.
N'agbanyeghị ihe niile mere, usoro Ural Ural agbanwebeghị ọtụtụ mgbanwe. Na mkpokọta, anyị nwere ike ịchọta ya nke ọma. Nyere na o nwere oke akụ di iche-iche dị ka mineral n'ụzọ bara ụba na ụba, mkpa akụ na ụba ọ nwere n'oge a niile dị elu. Otu n’ime ọtụtụ mineral anyị nwere ike ịchọta bụ nkwụnye ego nke ọla kọpa, carbon, manganese, ọla edo, ígwè, nickel, aluminom na potassium.
Enwekwara nnukwu akụ na ụba na ahịhịa nke na-agbanwe maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị iche iche anyị na-ahụ na ngalaba nke ọ bụla. N'ebe ndịda nke ugwu ahụ anyị na-ahụ nnukwu ahịhịa ahịhịa nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. More na akụkụ medial e nwere taiga na ụdị ọhịa dị iche iche na, n’ebe ugwu Oké Osimiri Caspian, anyị na-ahụ steepes na ọkara ọzara.
Banyere ụmụ anụmanụ, anyị na-ahụkwa ụdị dị iche iche dị ndụ. Anyị na-ahụ ụdị azụ, ọtụtụ invertebrates, mammals, na-akpụ akpụ, amphibians na nnụnụ. Otu n'ime ụdị kachasị dị iche iche bụ anụ ọhịa.
Enwere m olileanya na ozi a ga-enyere gị aka ịmatakwu banyere Ural Ural.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ural ugwu